Sale kulul sax Positioning 4G LTE GPS Tracker Car Mt600 Iyadoo Heerkulka Alarm Oo Anti-xatooyada warshad Alarm jiiday iyo alaab | Roadragon
Sale kulul sax Positioning 4G LTE GPS Tracker Car Mt600 Iyadoo Heerkulka Alarm Oo Anti-xatooyada Alarm jiiday
Our horumar ku xiran tahay marsho ku xeel, talanti fiican oo si joogta ah u xoogaystay ciidamada technology for Sale Hot for Positioning sax 4G LTE Car GPS Tracker Mt600 Iyadoo Heerkulka Alarm Oo Anti-xatooyada Alarm jiiday, Hadafkayagu waa "Saciira dhulka cusub, Gudbinta Value", ee ka iman kara, waxaan si daacad ah idiin ku yeedhi xagga hagaagaan ilaa nala iyo in la abuuro mustaqbal cad saadaalin karo si wadajir ah! Our horumar ku xiran tahay marsho ku xeel, talanti fiican iyo repeatedl ...
Min.Order Tirada: 10 Piece/Pieces
Supply Kartida: 30000 Pieces per Month
Our horumar ku xiran tahay marsho ku xeel, talanti fiican oo si joogta ah u xoogaystay ciidamada technology for Sale Hot for Positioning sax 4G LTE Car GPS Tracker Mt600 Iyadoo Heerkulka Alarm Oo Anti-xatooyada Alarm jiiday, Hadafkayagu waa "Saciira dhulka cusub, Gudbinta Value", ee ka iman kara, waxaan si daacad ah idiin ku yeedhi xagga hagaagaan ilaa nala iyo in la abuuro mustaqbal cad saadaalin karo si wadajir ah!
Our horumar ku xiran tahay marsho ku xeel, talanti taagan iyo Ciidamada technology si joogta ah ugu xoogeeyeen 4G GPS Positioning ,4G LTE Car GPS Tracker ,4G Positioning , in aan raacno farsamo ka xoogbadan, si loo farsameeyo kuwan waxyaabaha loo hubiyo in cimri dherer mug leh oo halaynta of alaabta. Waxaan raaci ugu dambeeyay lagu dhaqo wax ku ool ah iyo geedi socodka toosinta in na la oggalaado in ay bixiyaan tayada la ekaan ee alaabta iyo xal loogu talagalay macaamiisha our. Had iyo goor waxaan ku Dadaashid kaamil ah iyo dadaalka oo dhan waxaa si toos ah xagga gaadhitaanka dhamaystiran qanacsanaanta macmiilka.
F8 HDD terminal socodka video oo hormarsan la isticmaalayo technology ugu dambeeyay waxay ku salaysan tahay nidaam gundhig hawlgalka, xawaaraha sare ee warshadaha chip asaasiga ah, video gaari caqli socodka terminal in broadband 3G / 4G gudbinta multimedia wireless, isgaarsiinta wifi, ugu badnaan 8 DVR socodka HD ah iyo kaydinta video, Beidou / GPS nidaamka dual-hab-sax sare qaabkaaga iyo caqli helaan mid ka mid ah.
design qaybsan functional, video si dhab ah isku dhafan digital kaydinta (Digital, Video, Record), 4G gudbinta wireless, la socodka meelaynta satellite, hawlaha maamulka gaariga.
1. taageero GPS / Beidou boos dual-hab, gaari karo nidaamka submeter satellite boos sax ah la kor.
2.8 aqbasho video, 4 channel aqbasho audio, xaqiijinta gaari-waqtiga dhabta ah, kala duwan oo ay ka buuxaan audio iyo ilaalo video iyo video.
kala duwan 3.A of modules isgaarsiinta 3G / 4G la qaybiyay kartaa in ay ogaadaan-waqtiga dhabta ah gudbinta video wireless.
design 4.Unique qalabka ilaalinta disk adag iyo file gaar ah hab lagu kaydiyo si loo hubiyo awoodda badan oo lagu kaydiyo xogta deegaanka gaari adag ee ammaan ah oo lagu kalsoonaan karo.
5.Use 4 heer disk adag ilaalinta shockproof, ay qaataan saddex lakab oo gel silica design darafta ilaaliya, iyo isu geeyo taageero dhismeedka sanduuqa disk adag adag, si wax ku ool ujeedkiisu gariirka gaari hirka sare iyo mid hooseeya ilaalinta saameyn inta jeer.
6.The multimedia safraya software falanqaynta record ka warqaba ee audio iyo video, satellite track meelaynta, rikoorka iyo shil macluumaad shaki wadista, iyo sidoo kale ku celiska synchronous iyo falanqaynta gambaleelka iyo dhacdooyinka.
7.Built in tayo sare leh function TTS text cod baahinta.
8.Scalable goobaha wifi wireless si loo gaaro in qalabka baabuurta iyo rakaabka wireless helaan broadband wifi.
9.Built in module baska, baska saldhigga warbixinta si toos ah, dacaayad iyo hawlaha kale.
1. Video function: isticmaalaya H.264 technology video riixo in ay ogaadaan habka 8 image kormeerka-waqtiga dhabta ah, record saacado, wax lagu qoro dhacdo, alarm function duubo, xallinta image D1 / Half, D1 / CIF optional.
2. kaydinta Video: isticmaali disk adag iyo kaarka SD dhexdhexaad kaydinta isku dhafan, isticmaal format file patent si ay u qoraan function saxo xoog leh, la qabsado deegaanka gaariga, video iyo ammaanka file xogta.
3. Video function gudbinta: marayo 4G network wireless, gudbinta-waqtiga dhabta ah ee video-socoshada, gudbinta bitstream dual, xawaaraha hagaajin ah. Waxaad gali kartaa, qabashada iyo qaylo sawirada.
4. Video loo maqli karo shaqada, taageero 8 jidka video fog loo maqli-waqtiga dhabta ah.
5.Analysis of function multimedia: software duubo iyo falanqaynta multimedia ah, garasho kartaa .Wadashaqayntaas ee audio iyo video loo maqli 8 loo maqli karo, keydinta, tafatir, shuruudaha ku daray characters, macluumaadka juqraafiyeed iyo baabuur-wadidda function ku dahaadhaa record, falanqaynta dhacdo iyo shaqada record fiirsato.
6. socodka gaadiidka The function: korjoogteynta si toos ah iyo shaqada qabto, goobaha gobolka, function xayndaabka electronic, statistics GPS masaafada, statistics masaafada gaari, shaqo bubao indha la ', function xasuusta, saldhigga track booska gaariga kaabayaal ah.
function 7. Alarm: alarm degdeg ah, la dhigto alarm fekero, xawaaraha alarm, digniin xawaare sare, daal alarm wadista, off alarm line, xooggiisuna hoos, alarm awood yar yahay, GPS alarm qalad, antenna GPS, alarm circuit gaaban, iwm ..
8. Road shaqo la ogaado: xaqiijinta Yaw, qaybta xawaaraha xaddidan degdeg ah iyo qaylo, galaan / warbixinta saldhigga, gacanta goobta la xiriira.
9.The function module bas: kordhin module boosteejada basaska, waxaa lagu gaari karaa gaariga gudihiisa, saldhigga warbixinta si toos ah meel ka baxsan baska, darawalka qayliyeen. Iyada oo keyboard baska lagu gaari karaa: station warbixinta buuggan, RFID maamulka imaanshaha darawalka, function telefoonka; la caaqil saldhigga basaska lagu gaari karaa: station warbixinta buuggan, RFID maamulka imaanshaha darawalka. macluumaad Vehicle hawlgalka, macluumaad line, xawaaraha macluumaadka xadka, shirkadda Brøndby oo macluumaad iyo shaqada dhexgalka darawalka, function telefoonka.
10. line Intelligent update fog: hawlaha line sii daayo dhexe, boosteejada si loo gaaro line automatic download, marka la barbardhigo line, macluumaadka goobta, cod baahin, Qaybinta, xadadka xawaaraha iyo updates kale.
11. Voice iyo shaqada wac: gacmo-free telefoonka, shaqo la socodka fog gaariga, codkooda shaqo degdeg ah, TTS function warbaahinta codka qoraalka, xiriir cod.
12. Safarka shaqo taariikhqorihii: xidhiidhka shaqada macluumaad bandhigay, bandhigay macluumaad gaariga, ururinta macluumaadka iyo kaydinta, aqoonsiga darawalka, goobaha dhimaya, xogta dhoofinta / dejinta, xogta iyo daabacaadda macluumaadka.
function baska 13.Automobile CAN: waxa ay dhisi karaan baska CAN ama reserved xakamaysada bas bas si ay ugaaraan reading xogta, la socodka ammaanka, eed koombiyuutarka code iyo nadiifinta, ururinta masaafada isticmaalka shidaalka iyo wixii la mid ah.
function 14.Cloud Guardian: taageeraan cudurka fog eed iyo debugging, dayactirka barnaamijka fog si toos ah, qaabeynta u dhimaya fog, statistics hawlgalka terminal iyo shaqada kale ee "daruurta" fog masuulka.
15. kaaliyaha Voice: rakibi kartaa khadka signal dibadda, qalabka dibadda iyo dhigay xuduudaha ka ogaado si toos ah, isticmaalka codka dhexgalka Talooyin Rakibaadda ogaado, caawin shaqaalaha rakibidda si loo soo dajiyo is, si loo hubiyo in qalabka la geliyo si sax ah.
naqshadaha hardware Dual chip processing asaasiga ah, RTKe nidaamka qalliinka gundhig
module Isgaarsiinta 3G / 4G
design halaynta Power 4 ilaalinta, heerka 4 watchdog
ilaalinta guddiga Circuit Saddex caddayn rinjiga, ku xereen, ilaalinta
danab shaqada 9 ~ 36 V / DC
danab Xaddididda 100V / DC
danab ilaalinta Battery hooseeya: 10V (12Vehicle) ama 20V (24Vvehicle) sare: 36V
Power dambe danab iska caabin 100V
hadda shaqaynta Hawlgalka Celceliska hadda: hubin waqtiga xaadirka ah ugu hawlgalka hadda: hubin waqtiga xaadirkahab badbaado Power: ma hubo
batari firaaqada 820mAh
habka loo xirxiro Sii kordhaya taageerada dibadda
wax Shell kiiska birta
interface Audio 4 jidka aqbasho audio (madax hawada) 1 saarka audio channel (RCA)
Video interface 8 Jidka aqbasho video (madax hawada) 1 channel saarka video (RCA)
interface xogta Jidka 4 Rs-232 1 jidka USB, 1 jidka 485, 1 jidka CAN baska
dhexdhexaad kaydinta HDD
Automobile dhimbiil korontada difaac faragelinta danab dheecaan waa 10 kV 20 kV, iyo inta jeer dheecaanku waa 20 jeer / s ilaa 200 jeer / s
Korontada difaac raxan garaaca wadnaha transient soomi 4KV, fasalka tijaabooyin IV
ESD difaac Contact 6KV dheecaan, 8KV dheecaan hawada, fasalka tijaabo III
xadka khalkhal sameeyay Buuxiyey shuruudaha heerka B
Shucaaca xadka khalkhal Buuxiyey shuruudaha heerka B
dabeecad heerkulka SHAQAYNTA -30 ℃ ~ + 70 ℃ Bakhaarka -40 ℃ ~ + 85 ℃
huurka 5% ~ 95% non-isu keenida
format Picture Jpeg, GIF
xallinta Picture QQVGA160 Support × 120, QVGA320 X 240, VGA640 X 480 Taageerada SQCIF160 × 120, QCIF176 X 144,
Video Heerka riixo H.264
format image D1 / Half D1 / CIF / QCIF, Support for 8 jidka D1
Heerka jir 1-25fps
format ku suntan Multiple Support Amr, G711, G726, ADPCM suntan lagu qoro digital
Track record kaydinta 10,000 Bar kaydinta duubo track
khasnado bubao Blind Khasnado 1400 (buundo) macluumaadka goobta
Road kaydinta la ogaado 8 xogta wadada lagu hagaajin karo, wadada kasta ka kooban kartaa of 1023 khadadka laabanto iyo 256 saldhigyada
Yeelaan dukaanka deegaanka Waxaad samayn kartaa 80 meelaha qaab (halkaas oo 20 meelaha geesoolayaasha lagu hagaajin karo)
Previous: Factory Cheap Baodi Bluetooth Padlock Security Safety Padlock, Padlock Bluetooth / smart Lock App Lq-g701
Next: Biyuhu Vehicle GPS Tracker Strong Magneti Engine yaree Off sax Vehicle Hidden GPS Tracker
Dragon Bridge (SZ) Tech Co., Ltd waxaa la dejiyay 2005 oo ah soo saare qalab GPS Tracker xirfad leh, maahan oo kaliya Shenzhen High-Tech Enterprise laakiin sidoo kale waa shirkad Shiineeys ah oo heer qaran ah. Roadragon wuxuu diirada saaraa GPS tracker in ka badan 15 sano.
Qaabka Cusub ee Beeraha Qarnigii 21aad
Cilmi baaris ku saabsan Codsiga GPS Techno ...
Codsiga GPS ee Beeraha
Hirgelinta nidaamka gawaarida gawaarida ...
深 ICP 备 44030402001933 Xuquuqda daabacaadda - 2010-2017: Dhammaan xuquuq dhowran.